15 Samuel wee sị Sọl: “Ọ bụ m ka Jehova zitere wee tee gị mmanụ+ ka ị bụrụ eze ndị ya Izrel, ugbu a, gee ntị n’ihe Jehova kwuru.+ 2 Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha+ kwuru, ‘M ga-eme ka Amalek zaa ajụjụ+ maka ihe o mere Izrel mgbe o busoro ya agha n’ụzọ ka o si n’Ijipt na-apụta.+ 3 Gaa gbuo ndị Amalek+ ma laa ha na ihe niile ha nwere n’iyi,+ enwekwarala ha ọmịiko, gbuo ha,+ ma nwoke ma nwaanyị, ma nwatakịrị ma nwa na-aṅụ ara,+ ma ehi ma atụrụ, ma kamel ma ịnyịnya ibu.’”+ 4 Sọl wee kpọkọta ndị agha ya ma gụọ ha ọnụ na Telem,+ ha dị narị puku ndị ikom abụọ ji ụkwụ aga na puku ndị ikom iri si Juda.+ 5 Sọl wee bịaruo obodo Amalek ma zoo chebiri ha n’akụkụ ndagwurugwu. 6 Ka nke a na-eme, Sọl sịrị ndị Kenaịt:+ “Lawanụ,+ pụọnụ, sinụ n’etiti ndị Amalek pụọ, ka m wee ghara ikpochapụ unu na ha. Unu gosiri ụmụ Izrel niile obiọma*+ mgbe ha si n’Ijipt na-apụta.”+ Ndị Kenaịt wee si n’etiti ndị Amalek pụọ. 7 E mesịa, Sọl gburu ndị Amalek+ malite na Havila+ ruo na Shọọ+ nke dị n’ihu Ijipt. 8 O wee jide Egag+ bụ́ eze Amalek ná ndụ, o jikwa ihu mma agha bibie ndị ọzọ niile.+ 9 Ma Sọl na ndị agha ya nweere Egag ọmịiko, tinyere anụ ndị kasị mma n’ìgwè ewu na atụrụ na ìgwè ehi+ nakwa anụ ndị mara abụba nakwa ebule niile na ihe niile dị mma, ha achọghịkwa ibibi ha.+ Ma ihe niile na-abaghị n’ihe, ndị a jụkwara ajụ, ndị a ka ha bibiri. 10 Okwu Jehova wee ruo Samuel ntị, sị: 11 “Ọ na-ewute m+ na m mere ka Sọl bụrụ eze, n’ihi na ọ kwụsịwo+ iso m, o meghịkwa ihe m kwuru.”+ O wutekwara Samuel,+ o wee na-etiku Jehova abalị ahụ dum.+ 12 Samuel wee bilie n’isi ụtụtụ ịga zute Sọl. Ma a kọọrọ Samuel, sị: “Sọl bịara Kamel,+ ma, lee! ọ nọ na-ewuru onwe ya ihe ncheta,+ o wee tụgharịa, gafere ma gbadaa Gilgal.” 13 E mesịa, Samuel bịakwutere Sọl. Sọl wee malite ịsị ya: “Onye Jehova gọziri agọzi+ ka ị bụ. Emewo m ihe Jehova kwuru.”+ 14 Ma Samuel sịrị: “Gịnịzi ka ubé ìgwè ewu na atụrụ na ubé ìgwè ehi a m ji ntị m na-anụ pụtara?”+ 15 Sọl wee sị: “Ha si n’ala ndị Amalek chịta ha, n’ihi na ndị agha m+ nweere anụ ndị kasị mma n’ìgwè ewu na atụrụ ọmịiko, tinyere ìgwè ehi, maka iji ha chụọrọ Jehova bụ́ Chineke gị àjà;+ ma anyị ebibiwo ihe fọdụrụnụ.” 16 Samuel wee sị Sọl: “Kwụsị! M ga-agwa gị ihe Jehova gwara m n’abalị ụnyaahụ.”+ O wee sị ya: “Kwuwe!” 17 Samuel wee sị: “Ọ́ bụghị mgbe ị dị ntakịrị n’anya onwe gị+ ka ị ghọrọ onyeisi nke ebo niile nke Izrel, Jehova wee tee gị mmanụ+ ịbụ eze Izrel? 18 E mesịa, Jehova dunyere gị ozi, sị, ‘Gaa, bibie ndị mmehie ahụ,+ bụ́ ndị Amalek, lụsokwa ha ọgụ ruo mgbe i kpochapụrụ ha.’+ 19 Gịnịzi mere i ji ghara irube isi n’ihe Jehova kwuru, kama i ji anyaukwu maburu ihe nkwata+ ndị ahụ wee mee ihe jọrọ njọ n’anya Jehova?”+ 20 Otú ọ dị, Sọl sịrị Samuel: “Ma erubewo m isi+ n’ihe Jehova kwuru ebe m gara ozi Jehova dunyere m wee kpụta Egag+ eze Amalek, ma ebibiwo m ndị Amalek.+ 21 Ndị agha m+ wee si n’ihe nkwata ahụ na-akpụrụ atụrụ na ehi, ndị kasị mma n’ime ihe a ga-ebibi ebibi, maka ịchụrụ Jehova bụ́ Chineke gị àjà+ na Gilgal.”+ 22 Samuel wee sị: “Àjà nsure ọkụ na àjà nkịtị hà na-atọ Jehova ụtọ+ dị ka irube isi n’ihe Jehova kwuru? Lee! Irube isi+ dị mma karịa àjà,+ ịṅa ntị dịkwa mma karịa abụba+ ebule; 23 n’ihi na nnupụisi+ na mmehie nke ịgba afa+ bụ otu ihe, iji mpako na-ebute ụzọ n’ihe na iji ike anwansi na terafim eme ihe bụ otu ihe.+ Ebe ọ bụ na ị jụwo okwu Jehova,+ ya onwe ya ajụwo gị ka ị ghara ịbụkwa eze.”+ 24 Sọl wee sị Samuel: “Emehiewo m;+ n’ihi na emebiwo m iwu Jehova, erubeghịkwa m isi n’ihe i kwuru, n’ihi na m tụrụ ndị agha m egwu+ wee gee ntị n’olu ha. 25 Biko, gbaghara m+ mmehie m, soro m laghachi ka m wee daa n’ala+ n’ihu Jehova.” 26 Ma Samuel sịrị Sọl: “Agaghị m eso gị laghachi, n’ihi na ị jụwo okwu Jehova, Jehova ajụwokwa gị ka ị ghara ịbụkwa eze Izrel.”+ 27 Ka Samuel na-atụgharị ịla, Sọl jidere ya ozugbo n’ala ala uwe elu ya na-enweghị aka, ma ọ dọkapụrụ.+ 28 Samuel wee sị ya: “Jehova adọkapụwo+ ọchịchị Izrel n’aka gị taa, ọ ga-enyekwa ya mmadụ ibe gị bụ́ onye ka gị mma.+ 29 E wezụga nke ahụ, Onye Ukwu Izrel+ agaghị agha ụgha,+ ọ gaghịkwa akwa ụta, n’ihi na ọ bụghị mmadụ nke na ọ ga-akwa ụta.”+ 30 O wee sị: “Emehiewo m. Ugbu a, biko, kwanyere m ùgwù+ n’ihu ndị okenye nke ndị m nakwa n’ihu Izrel ma soro m laghachi, m ga-adakwa n’ala n’ihu Jehova bụ́ Chineke gị.”+ 31 Samuel wee soro Sọl n’azụ laghachi, Sọl wee daa n’ala n’ihu Jehova. 32 E mesịa, Samuel sịrị: “Kpọtaranụ m Egag eze ndị Amalek.” Egag wee jiri ụjọ gakwuru ya, Egag wee malite ịgwa onwe ya, sị: “N’ezie, agaghịzi m anụ ụfụ ọnwụ.” 33 Otú ọ dị, Samuel sịrị: “Dị nnọọ ka mma agha+ gị mere ka ndị inyom gbara aka ụmụ, otú ahụ ka nne gị+ ga-abụ onye kasị gbara aka nwa n’etiti ndị inyom.”+ Samuel wee gbukasịa Egag n’ihu Jehova n’ime Gilgal.+ 34 Samuel wee laa Rema, ma Sọl lara n’ụlọ ya dị na Gibia+ nke Sọl. 35 Samuel ahụghị Sọl anya ọzọ ruo ụbọchị ọ nwụrụ, n’ihi na Samuel amalitewo iruru Sọl uju.+ Ma o wutere Jehova na o mere Sọl eze Izrel.+